Forex Today : बिहिबार कति छ अमेरिकी डलरको भाउ ? यस्तो छ अन्य अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर ! (विवरणसहित) – Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
Forex Today : बिहिबार कति छ अमेरिकी डलरको भाउ ? यस्तो छ अन्य अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर ! (विवरणसहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहिबार अमेरिकी डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ २४ पैसा तोकेको छ भने बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकेको छ । यस्तै आज युरो एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ ।
यस्तै पाउण्ड एकको खरिददर १६० रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ ७५ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ । यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ ।
अन्य मुलुकको मुद्राको विनिमयदर यस प्रकार छ :
#ARCHIVE#OFF THE BEAT